Zeziphi ezona ndlela zibalaseleyo zokuKhuthaza iWebinar yakho?
In 2013, I-62% ye-B2B isebenzisa ii-webinars ukukhuthaza iimveliso zabo, ezinyuka ukusuka kwi-42% kunyaka ongaphambili. Ngokucacileyo, ii-webinar zifumana ukuthandwa kwaye kunjalo isebenza njengesixhobo sokuvelisa esikhokelayo, hayi isixhobo sokuthengisa nje. Kutheni le nto kufuneka ubabandakanye kwisicwangciso sakho sentengiso kunye nohlahlo-lwabiwo mali? Kungenxa yokuba ii-webinars zikwisikhundla esiphambili somxholo ekuqhubeni izikhokelo ezifanelekileyo.
Kutshanje, bendisebenza nomthengi kunye nesisombululo sewebhu esizinikeleyo, ReadyTalk, kumxholo othile ezona ndlela zingcono zewebhu kwaye kutheni iindleko zokhokelo zilungile. Ayisiyo kuphela ukuba ndifumene izibalo ezinkulu zewebhu, kodwa siza kuziphumeza kuthotho lwethu lwewebhu oluzayo izixhobo zokubeka iliso kwezentlalo, Meltwater (hlala ubukele!).
Ke, nazi iingcebiso eziphezulu ze-10 ze-webinar zokunyusa ekufuneka uzilandele xa ucwangcisa i-webinar yakho elandelayo:
Qala ukukhuthaza i-webinar yakho okungenani iveki enye ngaphambi komsitho -Ukufumana iziphumo ezilungileyo, qalisa ukuphuma kweeveki ezintathu. Ngelixa uninzi lwababhalisi bakho beza kubhalisa iveki yewebhu, oko akuthethi ukuba akufuneki uqale ukukhuthaza kwangethuba. Ngokwe- Ingxelo yeWebinar Benchmark ye2013, Ukuqala ukunyusa ubuncinci iintsuku ezisixhenxe ngaphandle kunokunyusa ubhaliso ngaphezulu kwe-36%! Iipesenti ziqala ukwehla, ngeentsuku ezi-2 ukuya kwezi-7 nge-27%, usuku langaphambi kwe-16%, kunye nosuku lwe-21%.
Sebenzisa i-imeyile njengendlela yakho ephambili yokukhuthaza iwebhsayithi -Ngophando lwe ReadyTalk, i-imeyile ihlala iyindlela ephezulu yokukhuthaza i-webinar, ene-4.46 ngaphandle kwe-5. Unokusebenzisa iisayithi zokukhuthaza zeWebinar njenge Ingqumbo yeOctopus.
Xa kuziwa kwii-webinars, i-3 linani lomlingo lemikhankaso ye-imeyile efakiweyo -Ukunikwa ukuba uqala ukukhuthazwa kwe-webinar ubuncinci iveki iphume, imikhankaso emithathu ye-imeyile lelona nani lilungileyo lokunyusa iwebhinar:
Thumela iphulo lokuqala lokukhuthaza iwebhsayithi yakho, uthetha ngesihloko kunye nengxaki oza kuyisombulula kwabo bamamele umxholo.
Thumela enye i-imeyile kwiintsuku ezimbalwa kamva kunye nomgca wesifundo kubandakanya nasiphi na isithethi seendwendwe okanye ulwimi oluqhutywa ziziphumo
Kubantu abasele bebhalisile, thumela i-imeyile ngomhla womsitho ukwandisa ukubakho
Kubantu abasadinga ukubhalisa, thumela i-imeyile ngomhla womsitho wokunyusa ubhaliso
Ubusazi? Ireyithi yokuguqula umndilili Umntu obhalisayo ukuya kwabahambi ngama-42%.
Thumela ii-imeyile ngoLwesibini, Lwesithathu, okanye ngoLwesine - I iintsuku kunye nababhalisi abaninzi NgoLwesibini ngama-24%, ngoLwesithathu ngama-22%, nangooLwezine nge-20%. Namathela embindini weveki ukuze uqiniseke ukuba ii-imeyile zakho azikhathalelwa okanye zisuswe.
Ubusazi? I-64% yabantu babhalisela i-webinar kwiveki yomsitho obukhoma.
Bamba i-webinar yakho ngoLwesibini okanye ngooLwezithathu -Sekwe kuphando kunye neDatha ye-ReadyTalk, ezona ntsuku zintle zeveki zokubamba ii-webinars ngooLwezibini okanye ngooLwezithathu. Ngoba? Kuba abantu bayabamba ngoMvulo, kwaye bayilungele impelaveki engoLwesine.
Bamba iwebhusayithi yakho kwi-11AM PST (2PM EST) okanye ngo-10AM PST (1PM EST) -Ukuba une-webinar yesizwe, emva koko elona xesha lilungileyo lokuqhuba iishedyuli zomntu wonke kwilizwe liphela Ngaba i-11AM PST (22%). I-10AM PST iza kwindawo yesibini nge-19%. Ukusondela kwilixa lesidlo sasemini, kokukhona kunqabile ukuba abantu babe sezintlanganisweni okanye babambe ekuseni.
Njalo, rhoqo, soloko unayo i-webinar yakho kwi-demand emva komcimbi (kwaye ukhuthaze ukuba uya kwenza njalo). - Njengoko sonke sisazi, izinto ezingalindelekanga zinokuvela kwishedyuli yethu. Qiniseka ukuba ababhalisi bakho bayazi ukuba banokufikelela kwi-webinar xa ifunwa, ukuba abanakukwazi ukuya okanye ukuba bafuna ukuyimamela kamva.
Nciphisa ifom yakho yobhaliso kwiifom ezi-2 ukuya kwezi-4. Olona guqulelo luphezulu iifom ziphakathi kweefom zeefom ezi-2 ukuya kwezi-4, apho uguquko lunokunyuka phantse nge-160%. Okwangoku, iqondo lokuguqula eliqhelekileyo xa umntu efikelela kwiphepha lokufika lewebhu yi-30-40% kuphela. Ngelixa kunokubonakala ngathi kulinga ukubuza ulwazi oluthe kratya kule fomu ukuze ube nakho ukulungela amathemba, kubaluleke ngakumbi ukubazisa kwi-webinar kunokuba uboyikise ngeendlela ezininzi. Okundizisa kwindawo yam elandelayo…
Sebenzisa iipolls kunye ne-Q & A ukuqokelela ulwazi ngakumbi malunga nethemba lakho. I-54% yabathengisi basebenzise imibuzo ukubandakanya abaphulaphuli babo kunye neepesenti ezingama-34 ezisetyenzisiweyo, ngokweedatha zeReadyTalk. Kulapho ungaqala khona ngoku incoko ngamathemba akho kwaye ufunde okungakumbi ngawo. Kwaye, ekugqibeleni ...
Ukuphinda-phinda ixesha lokwenyani. -Ngaphambi kokuba uqhube i-webinar ephilayo, qiniseka ukuba ukulungele ukuphinda ubeke umxholo kwakhona ngexesha lokwenyani lokuzibandakanya kunye nokukhuthaza abanye ukuba babe nomdla:
I-89% yabantu ijika i-webinar iye kwiposti yebhlog. Qinisekisa ukuba ucwangcisa enye ukuba iphume ngokukhawuleza emva kwewebhu, kunye nekhonkco elilungele abaphulaphuli bewebhu ukuba babhekise kuyo ukuba bayayifuna. Ingcebiso eyongezelelweyo: Sebenzisa ikhonkco enophawu lwentengiso ukulandelela kunye nokwenza i-url ibe mfutshane.
Nokuba unayo umntu osebenza kwi-tweet, okanye ucwangcise ii-tweets zokuphuma ngexesha lewebhu. Uya kufumana ukubandakanyeka koluntu ngakumbi ngexesha lomsitho.
Yiba ne-hashtag enikezelwe kumnyhadala kwaye wazise abo bezayo ukuze bakwazi ukulandela incoko.
Ewe, kunjalo, bantu. Ndiyathemba ukuba ezi ngcebiso zilula zikunceda ekukhuthazeni ii-webinars zakho zexesha elizayo!
tags: olona suku lubalaseleyo lokuba ne-webinarIintsuku ezilungileyo zokukhuthaza iwebhsayithiElona xesha lilungileyo lokuba ne-webinarEzona ndlela zingcono zokukhuthaza iwebhusayithiingwane ye-octopusindlela yokukhuthaza iwebhusayithiUyinyusa njani i-webinar yakhoUkuthengisa iWebinarsekulungileiindlela zokukhuthaza iwebhusayithiUkunyuswa kwewebhuiisayithi zokwazisa zewebhu
Abasebenzi beBrand Brands kunye neBhajethi yeNtlalo
Ngomhla wama-20 ku-Disemba 2013 ngo-9: 06 AM
Jan 17, 2014 ngo-8: 34 PM
Iposti entle kaJenn .. Inokwazisa ngokwenene .. Enkosi ngokwabelana!
Mar 18, 2014 ngo-8: 10 AM
UJenn, ndiyonwabele kakhulu iposti yakho. Amava am nge-webinars jibes uninzi lwento oyithethileyo. Ndinomdla, nangona kunjalo, ukwazi ukuba ugqibe njani ukuba uninzi lwababhalisi babhalise kwiveki ephelileyo ngaphambi kwewebhu. Sisoloko sithumela izimemo kwiiveki ezi-2-3 ngaphambi kwexesha, kwaye uninzi lobhaliso lwethu luza kwangoko emva kwesimemo sokuqala. Ndingathanda ukuva ngakumbi malunga namava akho.
Mar 18, 2014 ngo 2:06 PM
Molo Ben! Enkosi ngengcaciso yakho kunye nengxelo yakho. Ndiyifumene idatha malunga nababhalisi abavela kwi-ON24 yengxelo yebenmarkmark: http://www.on24.com/wp-content/uploads/2013/02/ON24_Benchmark_V8.pdf. Sikwabona ukungena xa sithumela i-imeyile yokuqala. Kodwa, ndizenzile izibalo, kwaye i-webinar yokugqibela esiyenzileyo ibinabantu abaninzi ababhalisayo phakathi evekini kunabo babhalise kwangoko emva kokuba i-imeyile iphumile. Enkosi kwakhona ngezimvo zakho kwaye ndiyathemba ukuba konke kulungile!
Mar 21, 2014 ngo-11: 01 AM
Iingcebiso ezigqwesileyo. Ndibambe i-webinar yam yokuqala kwiiveki ezi-2 ukuze ndiqiniseke ukuba ndisebenzisa iingcebiso ezininzi kangangoko ndinako.
Juni 14, 2014 ngo-1: 47 AM
Iingcebiso ezintle! Ngapha koko, olunye lwezona zintlu zeengcebiso zokuphucula i-webinar endikhe ndadibana nazo kuphando lwam! Into enomdla nangona abanye bethetha ukuba HAYI ukwenza i-webinar replay yakho ifumaneke. Ezinye iingcali zithi xa abaphulaphuli bakho besazi ukuba kuyakubakho ukuphindwaphindwa okwenziwe ukuba kufumaneke, izifundo zokuzimasa ngqo.
Oktobha 7, 2014 ngo-7: 45 PM
Eli yayilinqaku elihle kakhulu
Novemba 6, 2014 ngo-5: 45 PM
Siceba ukubamba iwebhu kamva kule nyanga. Siza kusebenzisa ezi ngcebiso ukuze sikulungele.
Yintoni enokuba ipholile ngokwenene ukuba ungathumela ishedyuli yokulungiselela iwebhinar.
Nov 7, 2014 kwi-11: 08 AM
URichard, licebo elihle elo! Ndiza kuyibeka kulayini wethu. Enkosi!
Meyi 10, 2015 kwi-3: 07 PM
Iposti entle kakhulu !!!
Meyi 15, 2015 kwi-2: 26 PM
Ndiyavuya ndiyifumene iposti yakho! Siqala nje ukwandisa iinkonzo zemfundo ngee-webinars kwaye ngokuqinisekileyo asinalo nofifi lokuba siza kuqala ngaphi! Ngaba wenza naluphi na udibana ngqo okanye uncede ngento enje? Siyi-Apple technology inkxaso nenkampani yemfundo apha embindini weFlorida.
Meyi 17, 2015 kwi-9: 35 PM
Molo Terry! Ndiza kudlulisela ulwazi lwakho kuJenn obhale le nto kwaye usinceda ngazo zonke ii-webinars zethu!
Jul 4, 2015 ngo-6: 12 PM
Enkosi ngeposi enomdla. Ndiyabona ukuba awukhankanyi ngokuhlwa kwii-webinars.
Ngaba ngekhe balunge?
Ukuba lishishini lasekhaya leentlobo eli ayizukuba lixesha elifanelekileyo kwaye leliphi ixesha kunye neentsuku onokuthi ucebise ngazo
Jul 19, 2016 ngo-11: 10 AM
Iingcebiso ezintle uJenn! Ukuza kuthi ga ngoku le yayiyeyona iposti inxulumene ne-webinar endiyifumene kuGoogle! Ezinye bezingangxamanga njengeyakho. Enkosi ngolwazi!
Jul 19, 2016 ngo-2: 14 PM
Enkosi kakhulu, Iris! Ndidinga ukuyihlaziya ngo-2016, kodwa ndingathi ezi zezinye zeengcebiso ezingapheliyo zokunyuswa kwewebhu. Nceda undazise xa unemibuzo! Ndiyavuya ukunceda.
Agasti 31, 2018 kwi-10: 01 AM
Ulwazi olukhulu apha uJenn. Ndikhe ndabona abantu bekhuthaza ii-webinars zabo kwimidiya yoluntu; I-Facebook yeyona inkulu kwaye ibalaseleyo. Unokwenza oku kwiakhawunti yakho yobuqu okanye usete iakhawunti yeshishini kwaye usebenze ngokujolisa kwiintengiso zemidiya yoluntu. Enkoso ngokwabelana!